BabyAngle: Blog Title ပြောင်းခြင်း...
ဒီနေ့မနက် blog ကိုဖွင့်တော့ C-box မှာ blog နာမည် တူလို့ဆိုပြီးရေးထားတာတွေ့တယ်.. တကယ်တော့.. တူတာရှိမှန်းလည်းမသိပါဘူး.. ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက အတိုင်းပေးလိုက်တာပါ...
blog ကို လုပ်ချင်တာတခုပဲသိပါတယ်...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကြောင့်သူတပါးစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်... blog လေးတစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး... စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်...
စိတ်သက်သာရအောင် blog လေးလုပ်တာအတွက်ကြောင့်..
ထပ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ တွေ့လာရမယ်ဆိုရင်တော့.. blog မလုပ်ချင်တော့ဘူး...
Posted by BabyAngle at 07:14
Labels: blog အကြောင်း
Chaw Su 31 August 2012 at 12:09
Blog လုပ်တာ စိက်မသက်သာပါဘူး ညီမလေး ရယ်... အရင်က အစ်မလေ မုန်.လေးစားလိုက်၊ ဝထ္တုဖတ်လိုက်၊ ကိုးရီးယားကားလေးကြည့်လိုက်၊ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ. လျှောက်လည်လိုက်၊ ဖုန်းပြောလိုက်နဲ. ဟုတ်နေတာကိုလေ.... စပ်စပ်ဆော့ဆော့ blog လုပ်လိုက်မိတာ ....စိတ်ရော၊ လူရော မောလိုက်တာ....း)
Chaw Su 31 August 2012 at 12:15
Blog လုပ်ရတာ မသက်သာပါဘူး ညီမလေးရယ်.... အစ်မလေ အရင်က ဝထ္တုဖတ်လိုက်၊ ကိုးရီးယားကားတွေကြည့်လိုက်၊ မုန်.တွေစားလိုက်၊ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ. လျှောက်လည်လိုက် နဲ. ဟုတ်နေတာကို စပ်စပ်ဆော့ဆော့ blog လေးလုပ်လိုက်ပါတယ်.... စိတ်ရော၊ လူရော မနားရပဲ... မောလိုက်တာမှ...း)
BabyAngle 31 August 2012 at 12:40
ဒါပေမဲ့ အမ မောရကျိုး နပ်ပါတယ်..
ညီမတို့လို့ ဟင်းချက်ဝါသနာပါပေမဲ့ သိပ်မချက်တတ်သေးတဲ့ သူတွေအတွက် အမက စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တဆင့်ချင်း ရှင်းပြ၊ ရေးပြပေးတော့ ညီမတို့လည်း အဆင်ပြေ၊ အမလည်း ကုသိုလ်ရတာပေါ့... ဒါလည်း သင်ဆရာတမျိုးပဲလေ... ညီမ ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ညီမရဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြလေ.. အမ ဒီထက်ပိုပြီး ဟင်းဆန်းဆန်းလေးတွေ ချက်နိုင်ပါစေလို့....